Fohy ihany io mitaingina fiaran-dalamby niala Geneva, ary ilaina na tsia mahita. Inona koa, izay tia Moyen Âge lapa ho faly amin'ny Château de Chillon, sy ny natiora azo antoka fa tia mankafy ny farihy.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “10 Andro Switzerland Travel faritany haleha izy” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F10-days-switzerland-itinerary%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)